कोपा अमेरिका जितेर अर्जेन्टिना फर्केका मेस्सीलाई एन्टोनेलाले यसरी गरिन् स्वागत… – Sandesh Press
July 12, 2021 249
अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलोपटक कोपा अमेरिका फुटबल जितेसँगै मेस्सीले अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिको खडेरी तोडेका छन्। यसअघि सन् २००८ मा मेस्सीले यू–२३ टोलीबाट अर्जेन्टिनाको लागि ओलम्पिक प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक हात पारेका थिए। तर सिनियर टोलीबाट भने उनले एउटा पनि उपाधि जित्न सकेका थिए।
कोपा अमेरिकामा ब्राजिललाई १–० ले पराजित गर्दै आइतबार बिहान अर्जेन्टिनाले कोपा अमेरिका जित्दा मेस्सीको सपना पुरा भयो। उनले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हात पारे। त्यति मात्र होइन मेस्सी प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए।
खेलपछि ब्राजिलबाट अर्जेन्टिना फर्किँदा मेस्सीलाई हजारौं फ्यानले स्वागत गरेका थिए। सो क्रममा मेस्सीकी श्रीमती एन्टोनेला रोकुजो पनि विमानस्थल पुगेका थिए। यतिबेला एन्टोनेलाले मेस्सीलाई विमानस्थलमा स्वागत गरेको तस्बिर र भिडिओ भाइरल भइरहेको छ। मेस्सी देख्नासाथ एन्टोनेला मेस्सीलाई अंगाल्न पुग्छिन् र चुम्बन गर्छिन्।
Prevयस्ता हुन्छन् अंग्रेजी अक्षर ‘A’ बाट नाम सुरु हुने मानिस, ‘जसै पूरा गर्छन् चाहना’
Nextआँखा रातो-रातो देखियो ? वेवास्ता नगर्नुहोस् ! हुनसक्छ कलेजो र मिर्गौला खराबीको संकेत